Kuhle Umkhiqizi we-IP60 Electric Linear Actuator kanye neFektri | IHoodland
● UMax Thrust: 130 N
● Stroke Ubude: 10 ~ 150mm
Incazelo YomkhiqizoI-IP60 Series High Speed ​​Electric Linear Actuator, encane ngosayizi wemoto eyakhelwe ngaphakathi, ingasetshenziswa kabanzi ezinhlelweni ezahlukahlukene, ezifana nombhede wokunakekelwa esibhedlela, ifenisha yasendlini, ihhovisi nokunye.
Ama-IP60 Series Electric Linear Actuators, athola elinye igama elibizwa ngokuthi i-actuator yesithupha ngenxa yokubukeka kwabo okuncane, okunezimoto ezakhelwe ngaphakathi, amandla kagesi e-regualr avela ku-DC 6-12V. Idizayini yomsindo ophansi, ileveli yomsindo engezansi kwe-65dB. I-actuator yethu eqondile enezinsimbi ezihamba phambili zokubuyisela emuva kanye nokuqina okuqinile kwezimoto, amadivayisi wezokwelapha kanye nomkhakha wobunjiniyela, imishini yezolimo, uhlelo lomshado, uhlelo lokuphakamisa ugesi ezimbonini, umbhede kagesi wezokwelapha, umbhede wokuhlinzwa, umbhede wokudonsa, usofa kagesi, isigwedlo sokuphakamisa ugesi, idokodo likagesi , i-sunroof kagesi, isihlalo esinamasondo sikagesi, njll. Kungashintshwa yimikhiqizo ye-hydraulic, ye-pneumatic ekahle yokonga ukusetshenziswa kwamandla.
Umthwalo wokucindezela umthwalo (olingana nomthamo wokudonsa umthwalo), kusuka ku-20N kuye ku-150N, ngamanye amagama, ama-actuator aqondile we-IP60 angadudula / adonse izinto ezingama-2kgs ~ 15kgs.
Ukushaywa unhlangothi okujwayelekile kwama-actuator we-IP60, kusuka ku-30mm kuye ku-150mm, ama-oda amaningi angakwazi ukwenza ngokwezifiso ubude obufunayo.
Sicela uqaphele ngezansi:
● Ngaphambi kokuyisebenzisa, sicela uhlole ukuthi amandla emoto alungile yini nokuthi ugesi owanele unele.
● Uyacelwa ukuthi ungagcini noma usebenzise ama-actuator aqondile ngokushisa okuphezulu noma nge-enviornment enomswakama, noma ubeke igesi elonakalisayo, elizonciphisa ukusebenza kahle kwezimoto nokusebenzisa impilo.
● Uma ufaka, sicela unake izikulufu uma zinde kakhulu futhi inkampani akumele idlulise ngokweqile izikulufo ezinde ezingxenyeni ezingaphakathi kwemoto.
● Abakaki nabalawuli badinga ukuthengwa eceleni, uma ungakwazi ukuthola imikhiqizo oyidingayo, ungaqondisa usithinte ku: cassie@thehoodland.com sizokuphendula ngekhotheshini ngokushesha okukhulu.
● Uyacelwa ukuthi ubheke ukuthi ngabe ama-actuator aqondile awonakele yini okokuqala lapho uthola, futhi uxhumane nathi.
IHoodland inikela ngemikhiqizo enhlobonhlobo ehlala isikhathi eside futhi ethembekile eyimali enhle kakhulu. Wonke umkhiqizo uvivinywe kanzima futhi wahlolwa ngokuqhathaniswa nezindinganiso zemboni ezifunayo, ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme ethembekile ngonjiniyela emhlabeni jikelele.
● I-Voltage yokufaka: DC 12V / DC 6V
● I-Powder Metallurgy Gear
Langaphambilini IP42 Electric LinearActuator
Olandelayo: IP800 Electric Linear Actuator
I-Forage Abavuni Actuator, I-Dc 24v Linear Actuator, I-Low Noise Linear Actuator, Double Acting eyisilinda Actuator, Isilinda Actuator, Electric Linear Actuator,